रहिनन् भारती , बलिउड अभिनेता सोनुले भाबुक हुदै लेखे यस्तो स्टाटस्.. मेरो मुटुमा तिम्रा लागी खास ठाउँ रहनेछ.. (भिडियो) – Ap Nepal
May 9, 2021 3202
सोनू ‘नृत्य दीवाना’मा भावुक भए समाल्न सकेन्न आफुलाई। गत हप्ता सोनू सूद रियलिटी शो ‘डान्स दीवाना’ को सेटमा पाहुनाका रूपमा आए। यस समयमा उनको आँखामा आँसु थियो, भारतीको परिवारको एक भिडियो देखाइएको थियो। भिडियोमा भारतीकी आमाले भावनात्मक भइरहेको बेला भने, “सोनू सर हाम्रो लागि (भगवान) एन्जिल हुन्।” हेर्नुहोस उत्त भिडियो
Prevदीपक मनाङेको १० दिनमै गुम्यो मन्त्री पद.
Nextनेपाल सहित यूएईले यी चार देशका नागरिकको प्रवेशमा रोक लगाउदै
के हो युरिक एसिड ? यो सम स्याबाट कसरी पाउन सकिन्छ छुटकारा….
छोरा बितेको १२ दिनमा बु,हारीलाई रातो लगाइदिने महान सासु मिडियामा (भिडियो सहित)